Ma Bisaylka Shacabka Soomaaliyeed ayaa isbedelka sabab u ah? | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Ma Bisaylka Shacabka Soomaaliyeed ayaa isbedelka sabab u ah?
11/12/2013 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Waxaa laga yaabaa in akhriste is yiraahdo, qoraagu muxuu ka sheekeynayaa! Xaggeese uu isbedelka uu sheegaayo ku arkay? Runtii lama yaabaayo haddii aad sidaas u fikirto waayo waxa noo dhimani wax yar ma aha oo waxa aan heysanno iyo waxa naga maqan waa kaaf iyo kala dheeri. Waxaase haboon mar kasta inaan fiirinno meesha ay wax noo maraayaan. Waxaan kaloon rabaa inaan tilmaamo in mararka qaarkood ay nagu badan tahay ka hadalka dhibaataayinka jira iyada oo la hilmaamo haba yaraatee horumarka jira.
Waxaan rabaa inaan idinla wadaago sheeko yar oo aan la kulmay maalin dhoweyto aniga oo maraya waddada caasimadda Soomaaliya ugu dadka badan uguna quruxda badan oo maanta iyadu heysata nalal iyo weliba jid qurux badan oo indhahaada soo jiidanaaya. Hareeraha jidkana ay indhahaadu la wareerayaan dhismooyinka iyo weliba dukaamada quruxda badan ee meel kasta laga furay.
Saacaddu waxa ay aheyd qiyaastii, sedexdii galabnimo oo weliba dad badan ayaa hareeraha waddada fadhiyay oo shaaheynayay, markii aan horteyda ka arkay nin dhalinyaro ah oo ay labo nin feer iyo haraati ku wadaan. Labada nin oo ninka dhalinyarada ah sidaas u jir dilaayay, mid ka mid ah waxa uu lebisnaa dharka ciidanka, balse ma garanaayo inuu boolis ama ciidamada xooga dalka midka uu ka tirsanaa. Ninka dhalinyarada ah oo ay sida xun ula dhaqmayeen waxaa sankiisa ka socday dhiig oo runtii aad ayaan uga calool xumaaday waxa ninkaas dhalinyarada lagu sameynaayey anoon garaneynin waxa aan sameyn karo si aan ugu yaraan uga joojiyo jir dilka si loogu simo heyadaha howshoodu tahay denbi baarista iyo garsoorka. Waxaa ila mid ahaa dad badan oo sidayda oo kale ay awood la’aani qabsatay oo aanan ka hadli Karin fool xumada ay arkayeen. Hadaba xaggee isbedelka aan sheegaayo uu ka jiraa haddii ay arintu sidaas tahay?
Waxaa aad iiga farxiyay markii wadada dhinaceeda kale uu ka soo dhawaaqay nin da’ dhexe ah oo isagu lebisan dharka booliska oo weliba ahaa xidigle si qurux badan u lebisnaa, si caro lehna ugu dhawaaqay labadii nin ee ninka dhalinyarada ah garaacayay. Waxa uuna yiri “Xaq uma lihid inaad sidaas u waxyeeleyso muwaadinka ee jooji waxa aad sameyneyso” markaas ayaa labadii nin iyagoo yaaban fiiriyeen xagga uu dhawaaqu uga imaanaayay, markaas ayey ku baraarugeen ninkaan quruxda badan oo ay heybaddu ka muuqato oo iyaga la hadlaaya. Markaas ayuu intuu u soo gudbay wadada dhinaceeda kale oo ay iyagu ku socdeen ku yjiri,” maadaama aan u dhownahay isteeshinka Waaberi oo wadada dabka wax yar u jira, sedexdiinaba i soo raaca, wax danbe oo aad ku dhufan kartaanna ma jiraan”. Runtii oodin ayaa iga soo fuqday markaan arkay qof masuul ah oo ay dhibeyso wixii i dhibayay oo weliba isagu awood u leh inuu joojiyo fool xumadii aan awoodi waayay inaan wax ka qabto, waxaana iigu danbeysay iyadoo afartoodii ay isu raaceen dhinaca isteeshinka degmada Waaberi.
Sheekadaan yar waa sheeko macno u sameyneysa oo kaliya qofkii soo arkay dhibkii uu dalka Soomaaliya soo maray. Taas macnaheedu ma aha inay dhamaatay dhibaatada muwaadiniinta lagu hayo balse waxaa soo baxaya dad mas’uuliyiin ah oo aan iyagu raali ka aheyn inay wax u socdaan sidii ay wax ku socon jireen. Waana tusaale aan aaminsanahay inaysan ku ekeyn dhacdadaan oo kaliya oo laga yaabo inay meelo badan ka jiraan isbedellada dhiiri gelinta mudan oo ay ku dhaqaaqayaan masuuliyiinta qaarkood.
Waxaa hubanti ah haddii ay bataan mas’uuliyiinta masuulkaas oo kale ah oo iyagu is adeejiya una adeega muwaadiniinta ay madaxda u yihiin oo iyaga oon loo dirin isku daya inay waxsaxaan xilli kasta iyo weliba meel kasta oo ay joogaan, in si weyn isbedel looga dareemi lahaa dalka oo dhan. Hadaba haddii aan ku soo noqdo su’aashii ciwaanka maqaalkaan kooban, waxa ay jawaabtu iila muuqataa in shacabku sabab u yihiin isbedelka yar ee maanta ka muuqda dalka Soomaaliya qaasatan magaalada Muqdisho, waxa uuse u baahan yahay dad howl kareen ah oo iyagu iskood isu dira oo sabab u noqda sidii isbedelka yar ee jira looga dhigi lahaa mid ballaaran oo saameeya nolosha muwaadiniinta oo dhan.
« Soomaaliya, Qofka Shacabka ahi Xuquuq Ma lee yahay?
Madaxaa Maraysee Meesha (wadada) ka Leexo! »